အိမ်မှာခရု Achatina ဂရုမစိုက် - တိုက်ကျွေးနိုင်ပါသည်ထက်အကြောင်းအရာ?
အိမ်မှာခရု Achatina ဂရုမစိုက် - အကြောင်းအရာလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ
အိမ်မှာခရု Achatina များအတွက်အရည်အချင်းစောင့်ရှောက်မှု - ထူးခြားဆန်းပြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏မိတ်ဆွေတို့ကိုများအတွက်အရေးပါသောခေါင်းစဉ်။ ဤရွေ့ကားအာဖရိကန်အလှအပ 25 စင်တီမီတာနှလုံးအရွယ်အစား, ကျောက်ကပ်, အဆုတ်, ဦးနှောက်တစ် shell ကိုတက်ရှိသည်နှင့်တစ်ဦး conditional တုံ့ပြန်မှုများ Clam ၏အကြီးဆုံးစဉ်းစားနေကြသည်။ သူတို့ဟာ unpretentious သော်လည်း, ထိုသူတို့အဘို့ပွုစုစောငျ့ရှောကျသောအခါအချို့သောအခြေအနေများတွေ့ဆုံခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။
Achatina - အကြောင်းအရာ
အာဖရိကခရု Achatina - အိမ်တွင်ပြည်, စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားဖြည့်အားထုတ်မှုမလိုအပ်ပါဘူး။ အတော်များများက aquarists သူတို့ကိုစံပြပြည်တွင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစဉ်းစားပါ။ Achatina အနံ့ပါဘူး, ဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး, ကိုက်ပါဘူး ဓာတ်မတည် တစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယအတွက်တစ်ဦးတည်းအသက်ရှင်ရန်လွယ်ကူသောခရု - တောင်အားလပ်ရက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ထိုသူတို့အဘို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခရီးစဉ်အပေါ်မစိုးရိမ်နိုငျသညျ, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လမ်းလျှောက်မလိုအပ်ပါဘူး။
ခရု Achatina များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အဘယ်သို့လိုအပ်သလဲ?
အိမ်တွင်အကြောင်းအရာနှင့်အတူဆင်း-အိမ်မှာ Achatina တစ်ပွင့်လင်းကွန်တိန်နာလိုအပ်ပါတယ်။ သင့်လျော်သောကွန်တိန်နာ:
ကခရု၏မိသားစုအသက်ရှင်ဖို့ပါလျှင် Clam အဆင်ပြေခံစားရစေရန်, ကွန်တိန်နာအသံအတိုးအကျယ်, အနည်းဆုံး 10 လီတာဖြစ်သင့် - ပိုဆိုလိုသည်။ incoming လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေလှောင်အိမ်သိမ်းပိုက်မလွတ်နိုင်သည့်မှတဆင့်သေးငယ်တဲ့အပေါက်နှင့်အတူအထက်အဖုံးများနှင့်အတူတပ်ဆင်ရပါမည်။ အိမ်မှာခရု Achatina ဂရုမစိုက် - သင်ကကွန်တိန်နာဖြည့်ပါ:
ယင်းအလွှာဟာ၏အောက်ဆုံး layer ကို 10 စင်တီမီတာမြင့်မားသော, သင့်လျော်သောပန်းပြည့်စုံသည် ဆွေး သို့မဟုတ်သစ်ဆွေးစင်ကြယ်သော။ ဒါဟာသဲ, hazelnuts ခွံသို့မဟုတ် core ကို walnut ထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကလုပ်ဖို့ကိုချစ်အဲဒီမှာ lay - အဆိုပါအလွှာဟာမြေပြင်သို့တူးနိုင်ခရုဖို့လိုအပ် ကြက်ဥ ။ ဆွေးနေ့စဉ်တစ်မှုန်ရေမွှားကနေအနည်းငယ် humidify ရန်လိုအပ်ပေသည်။
ထို့အပြင်ငါးမွေးကန်ကြီးမားသောကျောက်, driftwood, အုန်းသီးရှက်ထားနိုင် - ခရုသူတို့ကိုလွှဲမည်။ အစိမ်းရောင်အသီးအရွက်များ (အတန်ကြာခံစား, Ivy) ကလူနေမှုဧရိယာကိုအလှဆင်ခြင်းနှင့်အစားအစာမြို့သားများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
အကြောင်းအရာခရု Achatina ၏အပူချိန်
အာဖရိက Achatina တစ်ဦးနေအိမ်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု 20-30 ° C နဲ့ 80-95% စိုထိုင်းဆများတဲ့အပူချိန်မှာသက်သာခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့သောအခြေအနေများသူတို့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှပိတ်ပါ။ Activity ကို mollusk နေရောင်ခြည်, စိုထိုင်းဆနှင့်အပူချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အဆိုပါလမ်းလျှောက်တွင်သူတို့ညအချိန်တွင်သို့မဟုတ်မိုးကာလအတွင်းမှာအများစုထံသို့လာကြ၏။ အဆိုပါ gastropods ၏နံရံတက်လျှင် - ထို့နောက်မိမိတို့၏အိမ်သူအိမ်သားစိုထိုင်းဆအတွက်မြေ၌ဝှက်ထား - အများကြီးခြောက်သွေ့တဲ့။ ကွန်တိန်နာတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်နှင့်တစ်အပူ device ကိုအနီးနေရာချမပေးသင့်ပါဘူး။
အိမ်မှာ Achatina မှာဂရုမစိုက်
မွေးမြူဂဏန်းကွက်စဉ်အတွင်းဂရုမစိုက်, ငါးမွေးကန်မျှမျှတတနို့တိုက်ကျွေးရေးသန့်ရှင်းရေးလိုအပ်အကောင်းဆုံးအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆကိုထိန်းသိမ်းရန်ပြုစုစောင့်ရှောက်သည့်အခါ မှလွဲ. Undemanding ပြည်တွင်းခရု Achatina ။ သတိထားအာရုံစူးစိုက်မှုကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သံချပ်ကာမှပေးဆောင်ရပါမည် - ကရောဂါများနှင့်ပြင်ပဒဏ်ရာဆန့်ကျင်သည်၎င်း၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အိမ်မှာခရု Achatina ၏စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ရေကုသမှုစီစဉ်ဖို့ဖြစ်နိုင်:
ရေနှင့်အတူအအေးစည်ပိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဟာ terrarium အတွက်ထား, နက်ရှိုင်း၌အတွက်အရည်အများကြီးမဖွစျသငျ့သညျ။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရံဖန်ရံခါအကြောင်းကို3မိနစ်များအတွက်စုပ်၌သူ၏လက်၌သူတို့ကိုကိုင်ပြီး, တစ်ဦးနွေးထွေးသောရေချိုးခန်းစီစဉ်ပါ။
အိမ်မှာခရု Achatina ဂရုမစိုက် - လှောင်အိမ်၏သန့်ရှင်းရေး:
ကွန်တိန်နာသန့်ရှင်းရေး3လအတွင်း 2-3 ကြိမ်ထုတ်လုပ်ရန်။
အဆိုပါငါးမွေးကန်ရိုးကိုမနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့ချွဲနှင့်ဖုံးလွှမ်း (က gastropods တွားကျန်ကြွင်းသော) သို့မဟုတ်ကြား၏နေတယ်ဆိုရင် - သင်တစ်ဦး unscheduled သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဆောင်းရာသီအတွက်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ခရု Achatina fulica အထူးအာရုံစိုက်လိုအပ်သည်။ အတွက်လှောင်အိမ်ဂဏန်းကွက်အတွက်အနိမ့်သောအပူချိန်များနှင့်လုံလောက်မှုမရှိစိုထိုင်းဆမှာအအေးရာသီ hibernation ထဲသို့ကျစခွေငျးငှါ - hibernation, shell ကိုသူအကာအကွယ်ရုပ်ရှင်ပိတ်။ အတော်များများကမြိုးဆကျထက်ပိုမို2လ Achatina hibernation ရှောင်ရှားရန်အကြံပြုကြဘူး, ဒါမှမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းသေဆုံးလိမ့်မည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ငယ်ရွယ်တိရစ္ဆာန်များအဘို့ကိုဆိုင်းငံ့ကာတွန်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည် - သူတို့တက်ကြွစွာကြီးထွားလာခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကောင်းစွာအစာစားရန်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နိုးထဖို့, ကနွေးပြေးရေသို့မဟုတ်ပဲမိုးဖွဲအောက်မှာထိန်းထားရန်အကြံပြုသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်သူသည်အကာအကွယ်ရုပ်ရှင် crack ပါလိမ့်မယ်နဲ့အလင်းပုံရသည်။ အိမ်တွင် hibernate ပါဘူးခရုဖို့အကြံပြုအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆဖြစ်သင့်သည်။
Achatina - စုပ်စောင့်ရှောက်မှုများအတွက်
လိုအပ်အထူးစောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အခရု Achatina ကြီးမားသော washbasin ကအောက်ပါအချက်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်:
အဆိုပါဂဏန်းကွက်၏ကောင်းသောတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကယ်လစီယမ်၏လုံလောက်သောငွေပမာဏကိုခံယူသင့်ပါတယ်။ ဒါကျော်ကြားသောသူမသည် exfoliate မှစတင်ပျက်စီးလွယ်ဖြစ်လာ, နှင့်ခရုကိုယ်တိုင်နှင့်အလွန်ကြီးမားသောအချိုးအစားရောက်ရှိ - ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပြဿနာများနစ်မြုပ်ရန်စတင်နိုင်ပါသည်။ သူမကိုယ်ဝန်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပျက်စီးသွားသော shell ကိုရှိပါတယ်လျှင်အဖြစ်ကယ်လ်ဆီယမ်နေသောလိုအပ်ပါသည်။ ငှက်တွင်းထွက်ကြောကျခဲ - တတစ်သင်းလုံးကကစားသမားအသုံးပြုမှုကိုမြေဖြူတွေသုံးပြီးအဖြစ်, အမှုန့် eggshells သို့မဟုတ် Sepia သို့ grinded ။
နောက်ထပ်ဘုံပြဿနာ - ပဲ့နှင့် conch အက်။ တစ်ခါတစ်ရံဂဏန်းကွက်, အိမ်၏ထိပ်အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်တွား shell ကို၏ဒဏ်ရာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်ဆင်းကျရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်း (Achatina ထိုသို့ပြုမှကြိုက်တယ်) ဆန့်ကျင်ပွတ်သပ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကသီးခြားခွက်၌ပျက်စီးနေသောဧရိယာနှင့်ပိုးသတ်ဆေး otsadit အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ကြက်ဥ Achatina - စောင့်ရှောက်မှု
hermaphrodites - အိမ်မှာခရု Achatina စောင့်ရှောက်မှုတင်ဆောင်လာသောထိုအ mollusks သင်သိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးချင်းစီသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှစ်ဦးစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းရှိပြီး, 6-7 လအရွယ်သို့ရောက်ရှိပြီးနောက်, သူတို့မျိုးပွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပါတ်အတွက်သီးခြားခွက်၌ထားရှိလူကြီးများ၏စုံတွဲတစ်တွဲသားစဉ်မြေးဆက်အဘို့။ Achatina - giperplodovity, ကြက်ဥနှင့် ပတ်သက်.2ပတ်မိတ်လိုက်ပြီးနောက်မြေ၌သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံနေကြသည်။ ပန်းရံ 50-400 ကြက်ဥပါဝင်နိုင်သည်တစ်ချိန်ကသည်။ သူတို့ရဲ့အရွယ်အစား - 45 မီလီမီတာ, သူတို့ကကြက်သားတူပုံစံ။
အတော်များများကမြိုးဆကျ Achatina စောင့်ရှောက်မှုပန်းရံသီးခြားကွန်တိန်နာထဲကယူသွားတတ်၏။ သူတို့ကအစဉ်အမြဲလူကြီးများအနွယ်မရှိအပြစ်ပြုတူးရန်, သီးခြားပွင့်လင်းကွန်တိန်နာမှာသူတို့ရဲ့ပလပ်စတစ်ဇွန်း shift နဲ့ 1-2 စင်တီမီတာမြေဆီလွှာတွင်အလွှာနှင့်ဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါအလွှာများနှင့်သင်္ဘောနံရံအဖုံးကိုပိတ်လိုက်ဖို့စွမ်းရည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရေသွင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကြက်ဥဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ 25-27 ° C နဲ့ 70% RH အများ၏အပူချိန်မှာဖြစ်ပါသည်, ထိုအ parameters များကိုတန်ဖိုးအတက်အကျကိုရှောင်ရှားရန်အရေးကြီးပါသည်။
မွေးကင်းစခရု Achatina - စောင့်ရှောက်မှု
အာဖရိကခရု Achatina မွေးကင်းစ, ထိုပန်းရံဂရုမစိုက် fertilization ပြီးနောက်တစ်လမွေးဖွားခဲ့သည်တစ်ဦးအဆင်ပြေအပူချိန်အခြေအနေများ, ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကြက်ဥအခွံပါးလွှာဖြစ်လာပါကထဲကရှိသမျှကိုကယ်လစီယမ်နစ်သားသမီးများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်သုံးစွဲနေသည်။ ဂဏန်းကွက်များ၏ကလေးမွေးဖွား၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ခွဲခြားခြင်းနှင့်မြေထဲကရဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါဟာထွက်ရရန်မွေးကင်းစကကူညီရန်အပန်းရံပတ်ပတ်လည်ကိုမြေဆီလွှာကိုတက်တူးဖို့နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအရက်အနည်းငယ်အဆိုပါခရုသူမ၏ shell ကို၏အကြွင်းအကျန်စားတတ်၏။
အသေးစား Achatina - စောင့်ရှောက်မှု
ငယ်ရွယ် Achatina များအတွက်စောင့်ရှောက်မှု၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ:
မွေးကင်းစကလေးခရုများအတွက်ယာယီအိမ်ယာ 8-10 လီတာ, သူတို့ကမလိုအပ်ပါဘူးကျယ်ဝန်းအိမ်ပြန်များအတွက်စားနပ်ရိက္ခာကွန်တိန်နာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကွန်တိန်နာ၏ပထမလအနည်းငယ်အတွင်းတစ်ဦးသာမိုမီတာများနှင့်တစ်ဦး hygrometer ထားရန် သာ. ကောင်း၏။ အားလုံးဟာ Optimum အပူချိန် Achatina နည်းနည်းအကြောင်းအရာ - 25-27 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, စိုထိုင်းဆ - 65-70% ။
လိုချင်သောအပူချိန်တစ်ခုအက်ဒီဆင်တီထွင်ဆီမီးခွက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပါများနှင့်စိုထိုင်းဆ - ကိုလေပေါ်မှာပ။
သေးငယ်တဲ့ Achatina မြေပြင်သစ်ရွက်ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်ဆလတ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ သူတို့တစ်တွေအလွှာနှင့်အတူတစ်ဦး terrarium တှငျနထေိုငျပါကအပွင့်မြေပြင်အုန်းသီးမှ preference ကိုပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ မော့စ်, သဲ, sawdust နှင့်ကျောက်များ - အားပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။
ကြှနျုပျတို့မညျသို့ခရု Achatina အစာကျွေးနိုင်သလဲ
အိမ်မှာအာဖရိကခရု Achatina များအတွက်စောင့်ရှောက်မှုလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်စနစ်တကျနှင့်အချိန်မီ Clam မှသူတို့ကိုကျွေးမွေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျန်းမာမနာကြီးပြင်းလာတယ်။ သူတို့ရဲ့အစားအသောက်စက်ရုံအစားအစာများ, တွင်းထွက်ပစ္စည်းဖြည့်စွက်ခြင်း, တိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်း၏ရှိရေးသငျ့သညျ။ Achatina - သင့်လျော်သောအစာအာဟာရများနှင့်စောင့်ရှောက်မှု:
အစားအသောက်အခြေခံ: ဆလတ်, dandelion, ငှက်ပျော, အမျိုးမျိုးသောအစိမ်းရောင်; ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်စီရီရယ်ရိုက်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်: သခွားသီး, ဟင်းနုနွယ်ရွက်, ရွှေဖရုံသီး, မုန်လာဥနီ, zucchini, ခရမ်းချဉ်သီး, ပဲစေ့တွေဟာ။
သစ်သီးများနှင့်သီး: ပန်းသီး, သစ်တော်သီး, ဖရဲသီး, ဖရဲသီး, ငှက်ပျောသီး, apricots, Plum, စတော်ဘယ်ရီ, Raspberry, ချယ်ရီသီး။
ပရိုတိန်း: စင်ကြယ်သောအသားထုတ်ကုန်များ, ငါးအစားအစာ, အသားနှင့်အရိုးမုန့်ညက်, ပြုတ်ကြက်ဥ။
ဓာတ်သတ္တုနို့တိုက်ကျွေး: AFT မြေဖြူတွေသုံးပြီး, eggshell, အသေးစားပုစွန်, တွားသွားသတ္တဝါများအတွက်အထူး Blend, Sepia ။
အဆိုပါခရုပေးခွင့်မပြုဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကုန်များ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ သူတို့အဘို့အသေတတ်သောအန္တရာယ်မယ့်ဆားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့သန့်စင်သောပုံစံနှင့်အမြောက်အမြား၌အစားအသောက်များတွင်အတွက်သူတို့ကိုရမပြုခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ပေသည်။ gastropods နံ့သာမျိုး, ချိုမြိန်, သောက်သည်, စပ်သို့မဟုတ်အက်ဆစ်အစားအစာများ, ကြော်အစားအစာများကိုပေးခဲ့ပါဘူး။ စွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်လည်းခေါက်ဆွဲ, ကုန်ကြမ်းအာလူးနဲ့ Citrus အသီးအပွမှ, အဆုံးစွန်သောထိုစုပ်ခွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအပေါ်သက်ရောက်မှုအလွန်ကောင်းစွာမရှိကြပေ။
ချမ်းရာသီဂဏန်းကွက်အစားအစာများတွင်ရှားပါးဖြစ်သင့်ပါဘူး။ နို့ထဲမှာစိမ် oat အလွှာ, ဂျုံဖွဲနု, မုန့်: ဆောင်းရာသီအစားအသောက်များတွင်ပါဝင်ပါသည်။ မီနူးငှက်ပျောသီး, beets, မုန်လာဥနီဖြည့်စွတ်။ ပြတင်းပေါက်ပေါ်ခရုအများစုဟာမြိုးဆကျကြောင်များအတွက် vetmagazinah ရောင်းချလျက်ရှိသောအစိမ်းရောင်မြက်, ကြီးထွားထားလိုက်တော့။ လူအတော်များများက Achatina စည်သွတ်ထုတ်ကုန်ကျွေးမွေးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိမသိရပါဘူး။ အဖြေ - ဒါကြောင့်ဆားသင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ကျန်းမာရေးအဘို့ဆိုးရွားသည်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ နို့တိုက်ကျွေးမှုမပြုမီကသူတို့ကို unfreeze ငှါ, စူပါမားကက်ကနေအေးစက်နေတဲ့အစားထိုးဟင်းသီးဟင်းရွက်ပိုကောင်းချဉ်; ။
အဘယ်အရာကိုသေးငယ်တဲ့ခရု Achatina အစာကျွေးသလော
အာဖရိကခရု Achatina ၏သငျ့လျြောသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပြည့်အဝနို့စို့နွားသငယ်ကိုဆိုလို။ သေးငယ်တဲ့ခရုအစာကျွေးဖို့ကိုဘယ်လို:
သားသမီးများ၏အစားအစာများတွင်တစ်ပါတ်ပြီးနောက်တစ်ဦးကကော်ဖီ grinder အတွက်ဆန်ကုန်တယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်, ခြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ကယ်လစီယမ်နဲ့သီးနှံအရောအနှော, add ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အသက်တာ၏ဒုတိယရက်သတ္တပတ်ကနေ Menu ထဲမှာတိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ Achatina အစာကျွေးသလော
သငျသညျအိမျတျောကိုအာဖရိကန် Achatina, အာဟာရတှငျနထေိုငျကမှန်ကန်စွာပြုရပါမည်ဂရုစိုက်ပါ။ ခရုအစာကျွေး ညဉ့်သတ္တဝါတွေကိုသူတို့ညနေပိုင်းတွင်ကာလ၌တက်ကြွစွာဖြစ်လာ - ကြောင့်ဤဂဏန်းကွက်, ညဦးယံ၌ကောင်း၏။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့ထိုသူတို့အစားအစာနှင့်သည်အခြားနေ့ရက်ကိုပေးစေခြင်းငှါခွင့်ပြုတဲ့နေ့ကနို့တိုက်ကျွေးမှုတစျခု, ကင်းမဲ့နေသည်။ လူငယ်အစားအစာမှ non-stop access ကိုသေချာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အစားအသောက်ကြောင့်မှိုများနှင့်ဖုံးလွှမ်းမအလွှာနှင့်မပျက်စီးကြောင်းနှင့်အတူရောထွေးမရကြောင်းမြေပြင်ပေါ်တွင်တင်မရပါ။ ဆလတ် - စားစရာဘို့ကပန်းကန်သို့မဟုတ်အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ငါးမွေးကန်များတွင်ရေပုတ်သင်ငယ် - အကြောင်းအရာ
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်နှင့်ခွေး Aviary ကုမ္ပဏီ
ခရု Achatina - အဘယ်အရာကိုလုပ်ကျွေးသလော
ကလေးများအတွက် Hodgkin ရဲ့ရောဂါ
အဆိုပါ 80s ၏စတိုင်ဆံပင်ညှပ်
Cara Delevingne ဘိန်း
ပန်းသီးသစ်ပင်များ Pruning - လိုက်နာသင့်သောစည်းမျဉ်းများ, တစ်ဦးကြွယ်ဝသောစပါးရိတ်ရာကာလထုတ်လုပ်ရန်
Curly ဆံပင်ပေါ် Kare
မီးဖို၌ pies များအတွက်တဆေးမဲ့မုန့်စိမ်း